Hahita Ny Portugal
No tadiavinao ny antsasany, te-hanana ny tena matotra ny Fiarahana na Mampiaraka ny fanambadiana. Ianao no manam-pahaizana, manan-tsaina, mandray anjara amin’ny raharaham-barotra lehibe na ny fananganana ny asa, fa tsy efa tena tsy misy fotoana ho an’ny fiainany manokana.
Taona, ary ny Internet dia mavitrika lalina amin’ny sehatra rehetra ao amin’ny fiainany, ka dia ny fikarohana ny tapany faharoa amin’ny alalan’ny lehibe ny Fiarahana amin’ny tranonkala dia ho tanteraka ara-dalàna ary azo antoka fa tsy mendrika ny fitsarana an-tendrony ny ampahany amin’ny uncomprehending olona. Zava-dehibe mba hanana fianakaviana sambatra ny manontolo andro any am-piasana, indrafo mihinana ny rehetra ny maimaim-poana fotoana, ny tsy fahampian’ny fotoana mandroba anao ny fahafahana miatrika ny fitantanan ny hoavy. hanampy Anareo eo amin ny fikatsahana. Ny daty, ny toerana Mampiaraka an-tserasera ho an’ny fifandraisana matotra tokoa ny fahafahana tsy manam-paharoa izay mamela anao hijery ny be sy ny maro ny fampiharana (mihoatra ny roa tapitrisa), ankoatra izay dia azo antoka fa hahita izay tadiavinao. Eto dia afaka mahita ny mombamomba ny tokan-tena toy izany, mitady olona toa Anao. Ny olona mitady ny Fiarahana ho an’ny fanambadiana, te-hahita ny vady, olona iray vao liana amin’ny fifandraisana matotra. Raha toa ianao ka nitady ny fihaonana olona, ny Fiarahana amin’ny aterineto mikasika ny zavatra ilainao. Na angamba ianao liana amin’ny Fiarahana amin’ny olona iray. Eo amin’ny tranonkala ianao, dia tena mahita ny olona dia mila ny taona mahaliana. Ny fiainana dia toy izany ampoizina ary indraindray mampiseho ny hantsana mivadika ny lahatra. Tsy handà ny tenanao ny fahafahana hanova ny fiainany. Ka mijery ny fahasambarana, ary ho sambatra.
izany no tanjona
Dia ity tranonkala ity dia ho Anao. Namorona izany fa na iza na iza tonga eto afaka hahita izay notadiaviny. Voalohany indrindra, izany no loharanon-karena ho an’ny olona izay mihoatra noho ireo izay miantehitra lehibe Mampiaraka ny fanambadiana. Ny fifandraisana eo amin’ny olona roa tsy misy sisin-tany: afaka miaina miaraka na hamaha io olana io ho anao. Ny tsy manam-pahataperana feno olona misomebiseby ny fiainana, ny impermanence amin’ny fifandraisana manokana — moa ve Ianao sasatry ny rehetra izany. Avy eo dia mampiasa ny fahafahana mivory ny lehilahy iray izay mahaliana Anao, mitady ny tena fitiavana, sy, angamba, mahita mangina hahazoana ny fahasambaran’ny fianakaviana. Nahoana no tsy manome antsika ny hoavintsika. Ny website dia noforonina tanteraka ho toy izany mpitady izay fantatrao izay te-avy amin’ny fiainana. Eo amin’ny fiainana, araka ny fantatsika, na inona na inona atao. Ny fikarohana ny amin’ny alalan’ny Aterineto ankehitriny dia tsy mahagaga ny fahafahana hanao
← Ny teny vitsivitsy ny momba ny any Portiogaly
Ny lahatsary amin'ny chat roulette an-tserasera →